အဆိုပါရုပ်ရှင် 'PADMAVATI' ၌သူ၏အခန်းကဏ္ FOR သည် SHAHID KAPOOR ကရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး & အစားအစာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထွက် CHECK! - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ကျန်းမာရေး
အဆိုပါရုပ်ရှင် 'Padmavati' ၌သူ၏အခန်းကဏ္ For သည် Shahid Kapoor ကရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေး & အစားအစာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုထွက် Check!
နေအိမ် ကျန်းမာရေး အစားအသောက်ကြံ့ခိုင်ရေး အစားအစာကြံ့ခိုင်ရေး oi-Lekhaka မှ Chandana Rao နိုဝင်ဘာလ 8, 2017 တွင်
ငါတို့အများစုသည်လာမည့်လာမည့် Blockmaster 'Padmavati' အကြောင်းကိုကြားဖူးကြမလား။
'Padmavati' သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစောင့်ကြည့်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်အကြောင်းများစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ ယနေ့ Bollywood တွင်အကြီးမားဆုံးသောထင်ရှားကျော်ကြားသူနှစ် ဦး ဖြစ်သော Deepika Padukone နှင့် Shahid Kapoor ကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဤရုပ်ရှင်၏နောက်တွဲယာဉ်များနှင့်ပိုစတာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Shadid နှင့် Deepika နှစ် ဦး စလုံးသည်မည်မျှအံ့သြဖွယ်ကောင်းလိုက်သနည်း။
Shahid Kapoor ဟာအင်အားကြီးမားသောတည်ဆောက်မှုရှိသည့်ဘုရင်တစ်ပါးနှင့်တူရန် Maharaja Rawal Ratan Singh ၏အခန်းကဏ္ for အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအသွင်သဏ္-ာန်ပြုလုပ်ရန်သွားခဲ့ပုံရသည်။
အဆိုပါအစွမ်းထက်သည့်ပုံပန်းသဏ္bာန်ရှိသော၊ ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားသော ABS နှင့်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သူ၏မပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာသည်ခေါင်းများကိုလှည့်စေနိုင်သည်မှာသေချာသည်။
အမျိုးသမီးများသည် Shahid ၏ကိုယ်ထည်ကိုခေါက်။ အလုပ်များနေကြသော်လည်းယောက်ျားများသည်ထိုကြံ့ခိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုကြိုးစားရယူရန်လှုံ့ဆော်ခံရနိုင်သည်။
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျစ်လျစ်လျစ်လျစ်လျစ်လျူရှု ထား၍ ပြည့်စုံသောကိုယ်ထည်ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးခက်ခဲသောအလုပ်များ၊
ဒါကြောင့် 'Padmavati' ရုပ်ရှင်အတွက် Shahid Kapoor ၏အစိုးရမှအစားအစာနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
သိကောင်းစရာနံပါတ် ၁ ။ ကြံ့ခိုင်ရေးစားဖိုမှူး:
Shadid သည်သူ၏ကြံ့ခိုင်မှုစနစ်နှင့်အညီမျှတသောအစားအစာများကိုပြင်ဆင်ရန်ကနေဒါကြံ့ခိုင်ရေးစားဖိုမှူး Kelvin Cheung ကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြုလုပ်ထားသောကျန်းမာသောအစားအစာများကိုသင်လိုချင်ပါက၊
ထိပ်ဖျား ၂ ။ ကျန်းမာသောမုန်ညင်း
Chips နှင့် cookies များကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သည့်အစာများကိုအစားယူမည့်အစား Shahid သည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အုန်းသီးနို့၊ သရက်သီးစသည့်အသီးများမှပြုလုပ်သောချိုမြိန်သောအခွံများကိုပုံမှန်စားသည်။
သိကောင်းစရာ # ၃ ။ Artificial Sugar ကိုရှောင်ပါ။
Shahid သည်သူ၏ဓာတ်စာမှအတုသဏ္sugာန်အမျိုးမျိုးကိုခုတ်လှဲလိုက်ပြီးအသီးများမှဆင်းသက်လာသည့်သကြားဓာတ်များကိုမှီဝဲလျက်နေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတုရှိသောသကြားများသည်သင့်အားကိုယ်အလေးချိန်တက်စေရုံသာမကအစာအိမ်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
သိကောင်းစရာ # ၄ ။ Leafy Greens
ထိပ်ဖျား ၅ ။ သကြားနှင့်ဆားကိုဖြတ်တောက်ပါ:
ထို့အပြင် Shahid သည်သကြားနှင့်ဆားနှစ်မျိုးလုံးသည်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးပွားစေပြီးဖောင်းပွစေနိုင်သောကြောင့် ၁၅ ရက်လုံးလုံးသူ၏အစားအစာမှသကြားနှင့်ဆားကိုလုံးဝဖြတ်ပစ်ခဲ့သည်။
သိကောင်းစရာ # ၆ ။ Steamed ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ:
Shahid ၏အစားအစာတွင် steamed ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလည်းပါဝင်သည်။ ရေနွေးငွေ့တွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်ဆီများမပါ ၀ င်ပါ။ antioxidants နှင့်အခြားအာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သောကြောင့်သူတို့သည်သင့်အားကျန်းမာစေပြီးသင့်အသားအရေကိုလည်းတောက်ပစေပါသည်။
သိကောင်းစရာနံပါတ် ၇ ။ Boot Camp ကြံ့ခိုင်ရေးစနစ်:
ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်သရုပ်ဆောင်သည်တင်းကျပ်သောစခန်းဖွင့်သည့်ကြံ့ခိုင်ရေးစနစ်ကိုသွားခဲ့သည်။ သူသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ နာရီအလုပ်လုပ်သည်။ တစ်နေ့ကိုတစ်နာရီလောက်ပဲအလုပ်လုပ်ရတာတောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံအလောက်ကိုက်ညီစေနိုင်ပါတယ်။
သိကောင်းစရာနံပါတ် ၈ ။ Cross Fit:
Shahid သည်ကြွက်သားထုထည်ကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်လက်သည်းကိုက်ခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ လှေကားများ၊ တာယာများ၊ ကြိုးများစသည့်လေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်များပါ ၀ င်သည်။ Cross-fit နှင့် functional training များသည်အလွန်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံများဖြစ်သည်။
ယနေ့ခေတ်မြို့ကြီးများစွာတွင်အဆင်ပြေစွာနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သောလေ့ကျင့်ရေးစင်တာများစွာသည်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး သို့သင်ကိုယ်တိုင်စာရင်းသွင်းခြင်းသည်သင့်ကို ပို၍ ကောင်းမွန်စေသည်။
ထိပ်ဖျား ၉ ။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးလေ့ကျင့်ခန်း:
Shahid သည်ရှည်လျားသောပစ်ခတ်မှုကာလအတွင်းခံနိုင်ရည်နှင့်အဆုတ်စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အထူးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို 'အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးလေ့ကျင့်ခန်း' အဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းသည်မြို့များ၏အထူးအားကစားစင်တာများတွင်လည်းသူတို့၏သက်တမ်းကိုတိုးတက်စေရန်ရှာဖွေနေသည်။
nadan အမဲသားဟင်းစာရွက် kerala စတိုင်